Umhla.fm - Free Ividiyo Incoko Dating, Ihlabathi ke Ividiyo Incoko Dating App kwi-App Store
Featured kwi-USA Namhlanje, TechCrunch, BBC, CNN Imali, Gigamon, Heroku, colocalize, Dot FM, kwaye Openwork. Bukela ividiyo ngalo mhla.fm Umhla.fm intsha app ukuba rethinks kwaye simplifies njani abantu kuhlangana kwi-intanethi. Kakhulu abantu musa nkqu ufuna ukuzama-intanethi dating, kwaye thina musa t blame kwabo. Babe cela indlela abantu abaninzi personal imibuzo, ngoko ke baya share ukuba ulwazi kunye iqelana kwabasemzini, kwaye baya idla exabisa imali. Umhla.fm ucela a ezimbalwa ngenene ezisisiseko imibuzo kwaye ifumanise kuwe enokwenzeka imifanekiso. Oko ke ubonisa imifanekiso kunye umsebenzisi ngamnye ke ubudala kwaye jikelele indawo, kwaye ungathanda okanye dislike kwabo. Ukuba ufuna musa bona na iziphumo, okanye musa khangela nabani na kuni ngathi kanti ke, musa worry: Umhla.fm ndiya kuthumela kuwe indoda tyhala isaziso kwakamsinyane nje abantu abatsha safika kuba kuni. Ukuba umntu ufuna liked kanjalo likes kuwe, uzakufumana okhawulezayo tyhala isaziso ukuba ufuna anayithathela onayo ukufanisa. Ngoku, uyakwazi cofa kwi-incoko isithuba kwaye private incoko kunye nabo nge incoko ngevidiyo okanye umbhalo incoko. Ngubani omkhulu kukuba oku ngokupheleleyo eyahlukileyo kwincwadi yakho ezinye loluntu media, i-imeyili, okanye ezinye ii-akhawunti, ngoko uza kusoloko kufuneka ekhuselekileyo ukuze ezisebenza nge abantu abatsha. Ndiza kubona ukuba le app ngu lokwenene. Ukuba ndibona naliphi na iibhonasi abantu phaya kwa indoda abo harassing umyalezo, mna uphumelele khange ukuyisebenzisa simemo kwakhona. Akukho offense, ukuba ufuna ukwenza oku ngcono, kufuneka upstage ngayo ukuze ukutsala ngakumbi imihla.
Ndiza kubona ukuba le app ngu lokwenene. Ukuba ndibona naliphi na iibhonasi abantu phaya kwa indoda abo harassing umyalezo, mna uphumelele khange ukuyisebenzisa simemo kwakhona. Akukho offense, ukuba ufuna ukwenza oku ngcono, kufuneka upstage ngayo ukuze ukutsala ngakumbi imihla.
Ukuba s zonke ndifuna
Ndingumntu lesbian ngubani kuphela liked nge abantu abathe zabo dicks zabo inkangeleko umboniso. Andinako block kwabo. Mna sisiyaphambili kwi kukho kwaye nje flagging dick pics ukuba pop phezulu kwaye akukho nto isoloko kwenziwa malunga nayo. Kuphela ukungena ukuba ufuna kwakhona kwi wading ngokusebenzisa iqelana ka-dicks.
HAYI gay banobuhlobo
Ividiyo Incoko BFF – Loluntu Umbhalo Sithunywa Ne Zayo, Gay, Lesbian Icacile ezikufutshane kuba FaceTime, i-Skype, Kik Snapchat ngefowuni
← Chatroulette kwaye enye
Dating for umtshato - Dating for ezinzima budlelwane kwaye umtshato for free →